Qubanaha » Soomaali Xabsi Daa”in la gu xukumay Mareykanka.
Soomaali Xabsi Daa”in la gu xukumay Mareykanka.
Waaxda Cadaaaladda dalka Mareykanka ayaa xabsi daa’in ku xukuntay Maxamed Faarax, oo 31 jir ah kana tirsanaa maxaabiis uu Mareykanka burcad badeednimo ku qabtay 7 sano ka hor.
Maxamed waxa uu ka mid ahaa 6 qof oo 2010-kii weerar ku qaaday Markabka USS Ashland ee Mareykanka oo maraayay xeebaha Jabuuti hayeeshee iska caabiyay Burcad Badeeddii soo weerartay kadibna gacanta ku dhigay lix qof oo ay ka koobnaayeen.
Waaxda Caddaaladda Mareykanka waxa ay sheegtay in Maxamed loo xukumay doorkii uu ku lahaa weerarka Markabka Mareykanka uu leeyahay ee todob sano ka hor,shanta kale ee isaga ka horeeyay ayaa hadda ku jira Xabsiga xukun lagu riday kadib.
Maxamed ayaa la xukumay shalay oo Arbaco ahayd,waxaana gacanta lagu dhigay Bishii April 2010-kii markaas oo ay rasaas is weydaarsadeen Markabka Mareykanka iyo iyaga kadibna laga awood badiyay oo gacanta lagu dhigay,waxaana uu noqday qofkii ugu dambeeyay lixdaas qof oo la xukumay.
Xabsiyada caalamka, ayaa waxaa ku jira dhalinyaro badan oo Somali ah, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay burcad badeed yihiin, balse aysan helin weli caddaaladii loo baahnaa.
Somaliya kama jirto dowlad awood badan oo maxaabiista Somaliyed u doodeysa, islamarkaana u soo dhicinaysa xaqooda.